Xplora X5 Dlala i-smartwatch yabancinci | Iindaba zeGajethi
Xplora X5 Dlala i-smartwatch yabancinci
UMiguel Hernandez | 02/04/2021 16:00 | Ukuhlaziywa ukuba 27/03/2021 18:32 | ngokubanzi, Reviews
Itekhnoloji yeselfowuni kunye nobukrelekrele, nokuba zii-smartphones okanye naluphi na uhlobo lwesixhobo esixhumeneyo, yinto eyona incinci yosapho enxulumene nayo ukusukela oko yaqalwa, nangona kunjalo, kusekho uthotho lwezixhobo ezifana wearables ezinikezela ngemisebenzi enomdla kule nkalo apho sinokuthi sinike ukubalasela ngakumbi.
Makhe sijonge ukuba le X5 Play inganegalelo njani ekuziseni inkululeko kunye nokhuseleko kubantwana abancinci endlwini, kunye nendlela anokusebenzisa ngayo ukusebenza kwayo kubomi bakhe bemihla ngemihla.
Njengokuba kusenzeka ngamanye amaxesha amaninzi, sigqibe kwelokuba sihambe kunye nohlalutyo olunzulu lwevidiyo kwisiteshi sethu seYouTube esiya kuthi sikufundise kuyo ngaphandle kwebhokisi ukuze ujonge imixholo yebhokisi kwaye isondele kangakanani kwisixhobo , kunye nesifundo esincinci apho siza kukubonisa ukuba ungayilungisa njani ifayile yakho ye- Xplora X5 Dlala ukuyilungisa xa uyinika abancinci ekhaya. Thatha ithuba lokubhalisa kwisitishi sethu kwaye usishiye nayiphi na imibuzo kwibhokisi yezimvo.
2 Iimpawu zobugcisa kunye nokuzimela
3 Unxibelelwano kunye nokwenziwa kweendawo
4 Goplay: Yenze ihambe
Njengemveliso eyilelwe amakhwenkwe kunye namantombazana ukuba kunjalo, sifumana iplastikhi yerabha njengeyona nto iphambili. Oku kuyakulunga ngenxa yezizathu ezibini, esokuqala kukuba iya kuthintela abancinci ukuba bangazenzakalisi ngayo, ngendlela efanayo eya kuyenza ibe yimveliso enganyangekiyo. Eyona nto ibalulekileyo, esi sixhobo senziwa ngombala omnyama, nangona sinokukhetha isinxibo esihamba nesibhakabhaka, ipinki kunye nomnyama, kunye nezinye iinkcukacha ezincinci kwibhanti yesilicone ebandakanya oko kwaye kulula ukuyitshintsha.
Ubungakanani: X x 48,5 45 15 mm
Ubunzima: I-54 gram
Imibala: Mnyama, pinki naluhlaza
Kukhaphukhaphu kwimveku enesisindo esipheleleyo seigram ezingama-54 kuphela, nangona ubukhulu bebhokisi kunye nobukhulu bayo ngokubanzi bunokubonakala bukhulu kakhulu. Sikwanaso nesatifikethi se-IP68 esiya kuqinisekisa ukuba banokuyifaka emanzini, bayitshize kunye nokunye okuninzi ngaphandle koloyiko lokuyaphula. Ngokucacileyo, iXplora kunye newaranti yayo ayikhathaleli ukonakaliswa kwamanzi, nangona oku kungangabinangxaki.
Iimpawu zobugcisa kunye nokuzimela
Ngaphakathi kweli wotshi linomdla wokufihla iprosesa IQualcomm 8909W zinikezelwe ukunxiba, ziqhuba ingxelo yesiqhelo ye Android kunye ne ukubanakho ukufikelela kunethiwekhi ye4G kunye ne3G enkosi kwiSIM khadi slot efakiweyo kwisixhobo. Ngaphakathi ngaphakathi igcina i-4GB yomthamo wokugcina, Nangona singenayo idatha ethile malunga ne-RAM, sicinga ngokusebenza kwemisebenzi yayo eya kuhlala malunga ne-1GB. Kule meko asikhange sibe nezikhalazo, njengoko ubonile kwividiyo.
Ubungakanani besikrini: 1,4 intshi
Isigqibo bonisa: 240 x 240 pixels
Ikhamera 2MP edityanisiweyo
Kwibhetri sine-800 mAh iyonke eya kuthi ibonelele ngosuku lokusetyenziswa okuqhelekileyo ukuba senza izinto ezisisiseko zisebenze. Nangona kunjalo, ngesixhobo kwimowudi yokuma-ngaphakathi kuya kuba nakho ukusinika iintsuku ezintathu zokusebenzisa ngokweemvavanyo zethu.
Unxibelelwano kunye nokwenziwa kweendawo
Umlindo unenkqubo edityanisiweyo yeGPS exhaswa kukunxibelelana kwedatha ephathekayo, koku nokusebenzisa usetyenziso lwe-Android kunye ne-iOS. Indawo yomntwana iya kuboniswa ngexesha lokwenyani, kwaye sinokubanakho ukuseka Iindawo Ezikhuselekileyo », Iindawo ezithile ezizezakho eziza kukhupha izaziso kwifowuni xa umsebenzisi engena okanye ebashiya.
Eli candelo linxibelelene ngqo nolo lonxibelelwano, njengoko besitshilo, le wotshi izimele ngokupheleleyo kwaye ukuba siyabela yona ikhadi leSIM Nabani na onedatha kunye nokuvumelanisa umnxeba uya kusivumela ukuba sinxibelelane nomncinci ngokulula nangokukhuselekileyo. Sinokongeza ubuninzi babafowunelwa abagunyazisiweyo abangama-50 onokunxibelelana nabo ngeefowuni ngakwiskrini sakho sokuchukumisa. Ngokucacileyo sinokufunda imiyalezo ebhaliweyo kunye nee-emojis ezenzelwe wena kwiX5 Play.
Isicelo sibonakala siphumelele ngakumbi, ukusebenza kuyamanzi kwaye kudityaniswe ngokuchanekileyo kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza, nangona sifumene ukusebenza okuphezulu kwi-iOS. Ngokuqinisekileyo sesinye sezizathu eziphambili zokufumana isixhobo, kuba liziko laso lemithambo nangona iwotshi izimele.
Goplay: Yenze ihambe
Xplora ibandakanya ukubukela kwisizukulwana sayo samva nje iqonga lomsebenzi elibizwa ngokuba Ukudlala. Le nkqubo yeerekhodi kunye nemisebenzi iye yanikezelwa eYurophu, sayibeka ngokukhethekileyo ngenxa yokusebenzisana kwayo ne-Sony PlayStation. Abancinci baya kuba nakho ukwenza imiceli mngeni yabo kwaye ke bafumane umvuzo.
Xplora App ye-iOS.
Oku kuya kubanceda, ukuba nje siyabanceda kule nkqubo kwaye siyalamkela inyathelo, ukulwa nokuziphatha.
Eyona nto inomdla ngakumbi kukuba iwotshi ibandakanya ikhamera ye-2MP, Oku kuyakuvumela umntwana ukuba athathe iifoto ezinomdla kwaye wena, ngolawulo lwerimothi, naye uthathe imifanekiso.
Ulawulo lwabazali lunesikhundla esiphezulu kwisoftware efakwe kwisixhobo kwaye oku kubaluleke kakhulu. Le wotshi isebenzela abancinci njengendlela yokuqala yokunxiba, ngendlela efanayo esivumela ukuba sibeke esweni ngokungqongqo imisebenzi yabo, kwinqanaba lezokhuseleko naxa silwa nokuhlala phantsi, sisibetho esibalulekileyo ebantwaneni. Kucacile ukuba ukusukela kwimihla, le X5 Play ibekwe njengeyona mveliso inomdla ngakumbi kwiminyhadala, kuthathelwa ingqalelo iminyaka yemveliso kunye neempawu ezinikezelwayo.
Sithetha ngoku malunga nokubalulekileyo, iXplora X5 Dlala ingathengwa kwi eyakho iwebhusayithi yophawu ukusuka kwi-169,99 euro, Ixabiso elilinganiselweyo linikwe amanqaku anikezelweyo.
Ithunyelwe nge: 2 April 2021
Utshintsho lokugqibela: 27 Matshi we2021
Isicelo seXplora silunge kakhulu
Kucingelwe kakuhle kulawulo lwabazali
Ngandlela ithile enobunzima
Akukho lula ukuseta
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Xplora X5 Dlala i-smartwatch yabancinci
Ukukhawuleza komlilo we-HyperX, sijonga kwakhona le mpuku yokudlala